Guam Visitors Bureau Meets New Consular General Kobayashi of Japan | Business Travel News
Ikhaya » Iindaba zokuhamba ngeshishini » IGuam yeeNdwendwe eGuam idibana noMmeli Jikelele waseKobayashi waseJapan
IGuam yeeNdwendwe eGuam idibana noMmeli Jikelele waseKobayashi waseJapan
I-Guam Visitor Bureau (GVB) yadibana ne-Consular General yase-Japan u-Toshiaki Kobayashi nge-17 kaJuni ka-2020, ukuze aqinisekise ubudlelwane bezoqoqosho obukade bumi phakathi kwe-Guam ne-Japan ukusukela nge-1950s.
"Samkele u-Consul General Kobayashi kwaye sabelana naye ukuba iGuam isebenze ngokusondeleyo kurhulumente wase-Japan ngaphezulu kweminyaka engama-50 ukusukela oko kwaqala ukuhamba ngenqwelomoya ePam Am ngo-1967," utshilo owayesakuba yiRhuluneli uCarl TC Gutierrez, uMongameli we-GVB kunye ne-CEO . “Ngoku ngobhubhane wehlabathi we-COVID-19 kunye nendlela yethu yokubuyela kwimeko yesiqhelo, kuyakufuneka siqinise ubudlelwane bethu kwaye sisebenzisane ngobuchule ukwamkela iindwendwe zethu ezivela eJapan. Kufuneka sibonise ngokuzithemba ukuba isiqithi sethu sikhuselekile kwaye silungile. ”
Owayesakuba ngu-Govir Gutierrez wajoyinwa ngu-Sihlalo weBhodi ye-GVB u-P. Sonny Ada, usekela-Mongameli uGqirha Gerry Perez, kunye noMlawuli weNtengiso yeHlabathi uNadine Leon Guerrero kwintlanganiso yentlonipho.
UKobayashi wonyulwa njenge-Consul-General yaseJapan ukuya eGuam nge-12 ka-Epreli 2020 kwaye wathatha isikhundla sakhe ngoMeyi 14. Eli lixesha lakhe lokuqala ukuba abelwe umhlaba wase-United States. Wayekade enikwe iindima ezahlukeneyo e-Itali, Canada nase Australia kwi-Ofisi yoMphathiswa Wezangaphandle eJapan.
UKobayashi uthe uyasiqonda isidingo sokuba esi siqithi siqhubeke nokhenketho kwaye uzakudlulisa umyalezo weGuam kurhulumente waseJapan. Ubuye wahlaziya i-GVB ukuba iJapan ihamba ngokuthe ngcembe kwizigaba ezahlukeneyo ukuvula uhambo ngononophelo.
Ngelixa iJapan kunye neGuam kungoku nje zifuna ukuvalelwa okungagunyaziswanga kangangeentsuku ezili-14, i-GVB iyaqhubeka nokusebenza neenqwelomoya, iiarhente zokuhamba, kunye noorhulumente basekhaya ukulungiselela isiqithi ukuba silungele ukuvulela ukhenketho ngoJulayi 1.